‘Zvimbokoma zvaJoshua naWilder zvombomiswa’
You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»‘Zvimbokoma zvaJoshua naWilder zvombomiswa’
By Munyori weKwayedza on	 May 11, 2018 · NHAU DZEMITAMBO
Anthony Joshua anofanirwa kumira kwegore rese asati arwa naDeontay Wilder mumutambo weWorld Heavyweight Title Unification, sekutaura kwaBarry Hearn.
Asi, Hearn – uyo ane makore akawanda ari munyaya dzekuronga mitambo anoti achange asipo pachaitwa hurukuro dzekuronga nezvemutambo uyu pachasangana shasha iyi iyo ine mabhande eWBO, IBF neWBA naJoshua svondo rinotevera apo vacharonga remangwnaa rake mumutambo uyu.
Sachigaro weMatchroom – Hearn – akagadza mwana wake, Eddie, kuti agotungamira Joshua mumutambo uyu nenyaya dzake dzese asi anenge achiraira hake pano neapo zvese zvinenge zvichidiwa kuti basa riende kumberi.
Wilder, uyo ane bhande reWBC, mwedzi wadarika akanyorera Joshua padandemutande achitaura kuti vamiriri vake vane mari inosvika 35.9 miriyoni paunzi yekuronga kuti mutambo uyu uitwe pakati pavo gore rino.
Eddie akatsanangura kuti vane zvakawanda zvavanoda kuti vatange vavimbiswa vasati vasaina kuti mutambo uyu uenderere mberi.
Asi baba vake vakataura kuti nhandare yeManchester United yeOld Trafford ndiyo inogona kurongerwa kuitwa mutambo uyu vachiti, “Zvinogoneka”.
“Ndine musangano naAnthony Joshua svondo rinotevera naEddie, Eddie asati aenda kuNew York kunoronga mutambo uyu.” – SportsMail Boxing